चाउचाउ स्वादिलो बनाउन कति हानिकारक तत्व मिसाइन्छ ? – खबर खुराक
Home > स्वास्थ्य > चाउचाउ स्वादिलो बनाउन कति हानिकारक तत्व मिसाइन्छ ?
चाउचाउ स्वादिलो बनाउन कति हानिकारक तत्व मिसाइन्छ ?
२४ मंसिर २०७६, मंगलवार १३:२५
नेपालमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर हुन्छ भन्ने यकीन हुँदा हुँदै पनि धेरै मानिसहरुले तयारी चाउचाउको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । स्वाद र व्यस्तताका कारण नेपालमा चाउचाउको प्रयोग भारी मात्रामा बढेको बताइएको छ । नेपाल विश्वमा नै सबैभन्दा धेरै चाउचाउ खाने मुलुकहरुको बीचमा छ । विश्वको सर्वाधिक चाउचाउ प्रयोग हुने देशको सूचीमा चीन पहिलो नम्बरमा छ भने चौथो नम्बरमा भारत रहेको छ । यिनै धेरै प्रयोगकर्ताहरुको बीचमा रहेको नेपालले पनि एक दिनमा नै ४० लाख प्याकेट चाउचाउ खपत गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
के हुन्छ चाउचाउमा खराबी ?
चाउचाउको खराबी तत्कालै देखिने खालको हुँदैन । कुनैपनि तयारी चाउचाउ लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले बनाइएको हुन्छ । जसको लागि उनीहरुले अत्यधिक प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउने गरेका हुन्छन् । ती खानाहरुमा पौष्टिक सामग्रीहरु कम हुन्छन् भने फ्याट, क्यालोरी र सोडियम उच्च मात्रामा पाउने गरिएको हुन्छ । साथमा सुन्दर र मीठो देखाउनको लागि कृतिम रंगहरु, संरक्षणको लागि केमिकलहरु र थप फ्लेवरहरु समेत मिसाईएको हुन्छ । यो पनि स्वास्थ्यको लागि असरदायक हुन्छ ।
अधिकांश समय मोनो सोडियम ग्लुटामेट जसलाई हामी अजिनोमोटो नामले चिन्ने गर्छौं । त्यसका साथै टेटरियरी-बुटेल हाइड्रोक्विनोन (टीबीएचक्यु) र पेट्रोलियम उद्योगबाट प्राप्त हुने रासायनिक पदार्थहरुको समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यी पदार्थहरुका कारण नै चाउचाउ हानिकारक हुने गर्छ ।
गत वर्ष वाशिंगटन पोष्टले दक्षिण कोरियाली नागरिकहरुले खाने तयारी चाउचाउको मानव स्वास्थ्यमा परेको प्रभावको बारेमा एउटा अध्ययन गरेको थियो । “इन्स्ट्यान्ट नूडल्स (तयारी चाउचाउ) सुविधाजनक र स्वादिष्ट खाना भए पनि त्यसमा हुने मेटाबोलिक सिन्ड्रोमले खानामा उच्च सोडियम, अस्वस्थ्यकर चिल्लो पदार्थ र ग्लाइसेमिक भारका कारण जोखिम बढाउने गरेको छ ।’ सोही अध्ययनमा संलग्न हृयुन शिनलाई उद्धृत गर्दै वासिंटन पोष्टले जनाएको छ ।
सो अध्ययनका अनुसार हप्तामा दुई पटक वा सोभन्दा बढी इन्स्टन्ट नुडल्स खाएकी एक महिलाहरूकोमा कम चाउचाउ खाएका महिलाहरुको तुलनामा मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको जोखिम बढी भएको भेटिएको छ । सो अध्ययनको निष्कर्षमा अत्यधिक तयारी चाउचाउ उपभोगले मोटोपना बढाउने मात्र नभई मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु सम्बन्धी समस्या जस्ता नसर्ने रोगहरु समेत निम्तिने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
चाउचाउमा मैदाको असर
धेरै जसो तयारी चाउचाउहरु मैदाबाट बनेको हुन्छ । त्यसमा गहुँको पिठोको पनि मिश्रण हुन्छ । हाम्रो स्वास्थ्यको लागि मैदा सबै अवस्थामा खराब हुँदैन । तर, चाउचाउमा प्रयोग गरिने मैदा धेरै प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउने भएकोले यो पोषणबिहीन भइदिने पोषणविद्हरु बताउँछन् ।
बोसोको नराम्रो असर
सो अध्ययनमा लागेकी न्यूयोर्क विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक लिसा योङ भन्छिन् ‘तयारी चाउचाउमा उच्च मात्रामा चिल्लो पदार्थ, उच्च मात्रामा नुन र उच्च मात्रामा क्यालोरी प्रयोग गरिएको हुन्छ । साथमा त्यसलाई प्रशोधन पनि गरिएको हुन्छ । तयारी चाउचाउहरुमा स्याचुरेटेड ˆयाटहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । जसको मात्रा धेरै हुँदा वा नियमित रूपमा सेवन गर्दा रगतमा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्न जान्छ । उच्च कोलेस्ट्रोल हुँदा हृदय रोगको खतरा साथै मधुमेहको सम्भावना पनि बढ्छ ।’
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०७६, मंगलवार १३:२५
Posted in स्वास्थ्यTagged चाउचाउ
Previous: फाइनल हेर्न आफ्नै खर्चमा फर्किए महिला खेलाडी
Next: टालाटुली बटुली पुतली त होइन नेपाल